Asi Marita akanga achikangaidzwa nokushanda kwakanyanya kwaaiita. Akaenda kuna Jesu akati, “Nhai Tenzi, hamuna hanya nazvo here zvokuti munun'una wangu ari kundirega ndichishanda ndoga. Mutaurirei andibatsire.” Tenzi akamupindura achiti, “Marita, Marita iwe, unozvidya mwoyo nokuzvinetsa nezvakawanda. Chinhu chimwechete chinodiwa. Maria asarudza chakanaka chacho chaasingazombotorerwa.”
 Taurira vakadzi vakuru kuti vave vakatsiga vasina makuhwa kana kuva varanda vedoro; vanofanira kudzidzisa zvinhu zvakanaka, nenzira iyoyo vagodzidzisa madzimai echidiki kuda varume vavo navana vavo vakangwara vari vatsvene, vanochengeta dzimba dzavo, vano mutsa vanoteerera varume vavo kuti shoko raMwari rirege kushorwa.
 Ndinokurumbidzai nokundiyeuka kwenyu muna zvose uye nokuchengeta kwenyu magamuchidzanwa sokukudzidzisai kwandakaita. Asi ndinoda kuti muzive kuti Kristu ndiye musoro womurume oga oga, murumewo ndiye musoro womukadzi wake, Mwari ari iye musoro waKristu. Saka murume anonamata kana kuporofita akafukidza musoro anozvishoresa musoro wake. Asi mukadzi wose anonamata kana kuporofita asina kufukidza musoro anozvishoresa musoro wake. Zvakangofanana nokunge akaveurwa musoro wose. Kana mukadzi asingazvifukidzi musoro ngaaveure vhudzi rake. Zvino kana zviri zvakafumuka kuti mukadzi aguswe kana kuveurwa, ngaazvifukidze musoro nevhoiri. Murume haafaniri kuzvifukidza musoro nokuti iye mufananidzo nembiri yaMwari. Asi mukadzi imbiri yomurume, nokuti murume haana kuitwa achibva pamukadzi asi mukadzi akaitwa achibva pamurume. Uye murume haana kusikirwa mukadzi asi mukadzi akasikirwa murume. Pamusana paizvozvo mukadzi anofanira kuva nevhoiri mumusoro pamusana pavatumwa. Zvakadaro zvazvo, muna Tenzi, mukadzi haagoni kuvapo pasina murume, murumewo haagoni kuvapo pasina mukadzi. Sokuitwa kwakaitwa mukadzi achibva kumurume saizvozvowo murume anoberekwa nomukadzi. Asi vose vanobva kuna Mwari. Munozvionawo sei, zvinokodzera here kuti mukadzi anamate kuna Mwari asina kufukidza musoro? Ko iwo masikirwo akaitwa zvinhu pachawo haakudzidzisei here kuti, zvokuti murume achengete vhudzi refu, hazvimupi chimiro asi mukadzi akachengeta vhudzi refu ndizvo zvinotomudadisa nokuti akapiwa vhudzi rakareba kuti chive chokuzvifukidza nacho. Kana pane wenharo ndezvake; asi isu kana masangano aMwari hapana imwe tsika yatinoziva.
 nokuti Mwari haasi Mwari wenyonganyonga asi worugare somumasangano ose avatsvene. Vakadzi ngavanyarare mumasangano nokuti havabvumirwi kutaura asi vanofanira kuzviisa pasi sokutaura kunoita mutemo. Kana pane chavanoda kuziva ngavabvunze varume vavo kumba, nokuti chinhu chinonyadzisa kuti mukadzi ataure musangano.
Mukadzi ngaadzidze chinyararire nokuzvidukupisa kose.
 Imi vadzimai zviisei pasi pavarume venyu sokuna Tenzi nokuti murume ndiye musoro womudzimai sezvakangoita Kristu ari musoro wesangano iro riri muviri wake uye iye ari mununuri waro. Sangano sezvariri pasi paKristu, vadzimaiwo ngavave pasi pavarume vavo muna zvose.
Ndinoturira kwauri hanzvadzi yedu Febhi mutungamiriri mushandiri wesangano rokuKenikerie kuti mumugamuchire muzita raTenzi zvinokodzerana navatsvene.
 vagodzidzisa madzimai echidiki kuda varume vavo navana vavo vakangwara vari vatsvene, vanochengeta dzimba dzavo, vano mutsa vanoteerera varume vavo kuti shoko raMwari rirege kushorwa.
Imi vadzimai zviisei pasi pavarume venyu sokuna Tenzi
Nezvo ini ndinoti chirikadzi dzechidiki ngadziroorwe dzibereke vana dzichengetedze mhuri dzadzo dziregewo kupa muvengi mukana wokutaura zvakaipa nezvedu.
 Pakangawo paina madzimai mazhinji ipapo akanga akatarisa ari chinhambwe, akanga atevera Jesu kubva Garirea achimushandira. Pakati pavo paiva naMaria Maghadharena naMaria amai Jemusi naJosefi namai vavanakomana vaZebhedhi.
 Vakadzi ngavanyarare mumasangano nokuti havabvumirwi kutaura asi vanofanira kuzviisa pasi sokutaura kunoita mutemo. Kana pane chavanoda kuziva ngavabvunze varume vavo kumba, nokuti chinhu chinonyadzisa kuti mukadzi ataure musangano.
Panguva iyoyo Dhebhora muporofita wechikadzi, mudzimai waRapidhoti ndiye aitonga vaIsiraeri.
Ndikwazisireiwo Andironikusi naJuniasi hama dzangu vakanga vari vamwe vangu muusungwa, varume vanoremekedzeka pakati pavapositori. Vakanditangira kuva naKristu.
Zviisei pasi pomumwe nomumwe wenyu pamusana pokuremekedza Kristu.
Chako iwe kudzidzisa chidzidziso chinovaka.
Murume haafaniri kuzvifukidza musoro nokuti iye mufananidzo nembiri yaMwari. Asi mukadzi imbiri yomurume,
 Ndiani zvake akawana mukadzi wakanaka anokosha zvikuru kupinda zvishongo. Mwoyo womurume wake unovimba naye. Haashaye chaanowana. Anomuitira zvakanaka kwete zvakaipa mazuva ose oupenyu hwake. Anotsvaka wuru netseta achishanda nomwoyo unoda. Akaita sengarava dzomushambadzi anobva nechokudya chake kure. Anomuka huchiri usiku achipa mhuri yake zvokudya uye basa kuvasikana vake vebasa. Anotsvaka munda wokutenga, anosima munda wemigirepisi nesimba remaoko ake anogwinyisa chiuno nokusimbisa maoko, anoona kuti zvinhu zvake zvinofamba zvakanaka rambi rake haridzimi usiku hwose. Anotambanudzira maoko ake kuchivhimbo chewuru achibata chokurukisa neminwe yake. Anozarura ruoko rwake kupa varombo achitambanudzira maoko ake kune vasina chavanacho. Haatyiri imba yake chando nokuti mhuri yake yose inenge yakapfeka zvitsvuku. Anozvigadzirira oga zvokufukidza nazvo mubhedha wake, hanzu dzake ndedzerineni yakanakisisa dzeruvara rwohute. Murume wake munhu anozivikanwa padare kana agere pakati pavakuru-vakuru venyika anoita machira erineni achiatengesa achiwanisa vashambadzi mabhande. Simba nechiremera ndozvipfeko zvake, anotosekerera mazuva ari kuuya. Anozarura muromo wake noungwaru uye zvokudzidzisa tsitsi ndozviri pamuromo pake. Anoongorora kuti mhuri yake yakagara sei, haadyi chokudya chounyope. Vana vake vanosimuka vachimuti, “Makakomborerwa,” uyewo murumwe wake anomurumbidza achiti, “Vakadzi vazhinji vakaita zvakanakisisa asi iwe unovakunda vose.” Kuyevedza kunonyengedza, runako haruna maturo asi mudzimai anotya Tenzi anofanira kurumbidzwa. Anofanira kurumbidzwa pamusana pezvaakaita namaoko ake ngaarumbidzwe namabasa ake padare.
 nokuti Adhamu ndiye akatanga kusikwa ndokuzouya Evha. Adhamu haasiriye akafurirwa asi mukadzi ndiye akafurirwa akava mutadzi.
Mubhishopi haafaniri kuva nechaanoshorwa nacho. Anofanira kuva murume womukadzi mumwechete asiri muraradzi, munhu anonzwisisa ane chiremera anoziva kugamuchira vaenzi uye mudzidzisi kwaye;
Vakadziwo ngavave vakatsiga vasina makuhwa vasiri zvidhakwa, vakatendeka muna zvose.
Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi.
nokuti murume ndiye musoro womudzimai sezvakangoita Kristu ari musoro wesangano iro riri muviri wake uye iye ari mununuri waro.
Ndizvozvowo nemi varume, munofanira kugara navakadzi venyu nokunzwisisa muchivaremekedza savanhu vasina simba serenyu. Varemekedzei nokuti vachagamuchira pamwechete nemi chipo choupenyu kuti minamato yenyu irege kupingidzwa.
 Madzimai zviisei pasi pavarume venyu sezvazviri izvo zvinokodzerana nomunhu muna Tenzi. Imi varume idai vakadzi venyu musave norushusho kwavari.
 Mwari akati, “Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ngavave noutongi hwenyika yose nohwehove dzomugungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo nezvinokambaira nokuzvova napasi.” Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi. Mwari akavakomborera achiti, “Berekanai muwande, muzadze nyika, muitonge. Ivai noutongi pamusoro pehove dzomugungwa, neshiri dzedenga, nezvinhu zvose zvipenyu zvinofamba panyika.”
 Ndizvo zvimwechetewo nemi madzimai zviisei pasi pavarume venyu kuti vamwe vavo kunyange vasingateereri shoko, vanogona kubatwa mwoyo nomugariro wavakadzi vavo pasina chataurwa, kana vaona kuremekedza kwenyu noupenyu hwenyu hwakachena. Kuzvishongedza kwenyu ngakurege kuva kokunze zvakaita sokugadzira vhudzi nokuzvishongedza nendarama nokupfeka hanzu dzamandiriri. Runako rwenyu ngaruve rwohunhu hwakavandika rwomumwoyo nechishongo chisingaparari chomweya wakapfava worunyararo wakakosha kwazvo pana Mwari. Saizvozvo ndizvo zvaiitwa navakadzi vakare vatsvene vaiva nechitarisiro muna Mwari. Vaizvishongedza nokuzviisa pasi pavarume vavo sokuteerera Abhurahumu kwakaita Sara achimuti Tenzi. Zvino imi ndimi vana vake kana mukaita zvakanaka musina chamunotya. Ndizvozvowo nemi varume, munofanira kugara navakadzi venyu nokunzwisisa muchivaremekedza savanhu vasina simba serenyu. Varemekedzei nokuti vachagamuchira pamwechete nemi chipo choupenyu kuti minamato yenyu irege kupingidzwa.
Mukadzi akarurama indaza kumurume wake asi mukadzi anonyadzisa akaita senhuta yamapfupa kumurume wake.
Vakadzi ngavanyarare mumasangano nokuti havabvumirwi kutaura asi vanofanira kuzviisa pasi sokutaura kunoita mutemo.
Ndikwazisireiwo hama dziri muRaodhesia naNipfa nesangano riri pamusha pake.
 Ndinokukumbirisai imi vaYuodia navaSindike kuti munzwanane muna Tenzi. Hongu ndinokumbirawo, iwe mumwe wangu akatendeka kuti ubatsire madzimai aya nokuti vakashanda pamwechete neni mubasa reShoko Rakanaka pamwechetewo naKeremendi navamwe vose vandaishanda navo vana mazita ari mubhuku roupenyu.